Zinedine Zidane Oo Doonaya Inuu Markale La Shaqeeyo Cristiano Ronaldo Iyo Raphael Varane
HomeWararka CiyaarahaZinedine Zidane oo doonaya inuu markale la shaqeeyo Cristiano Ronaldo iyo Raphael Varane
Tababarihii hore ee Real Madrid Zinedine Zidane ayaa lagu soo waramayaa inuu doonayo inuu markale la shaqeeyo Cristiano Ronaldo iyo Raphael Varane xilli ay jiraan warar xan ah oo la xiriirinayo shaqada Manchester United .
Red Devils ayaa isha ku haysa beddelka joogtada ah ee Ole Gunnar Solskjaer , kaasoo aan la magacaabi doonin ka hor dhammaadka xilli ciyaareedka 2021-22.
Inkasta oo ay soo baxayeen warar sheegaya in uu sugayo shaqada France si ay diyaar u noqoto, Zidane ayaa loo malaynayaa in uu yahay musharaxa ugu horeeya ee qaban kara shaqada Old Trafford.
Laacibka reer France ayaa guulo waaweyn la gaaray Ronaldo iyo Varane xiligii garoonka Bernabeu, TalkSPORT ayaana sheegtay inuu aad u jeclaan lahaa inuu dib ula midoobo labadan xidig ee ku sugan Manchester.
United ayaa diirada saaraysa sidii ay u magacaabi lahayd tababare ku meel gaadh ah wakhtiga la joogo, inkasta oo Laurent Blanc loo malaynayo in uu yahay musharrax si ku meel gaar ah u sii haya.
Michael Carrick ayaa hogaamin doona kooxda wakhtiga la joogo, raadinta United ee ku saabsan badalka Solskjaer ayaa la filayaa in ay arki karto Ed Woodward in uu dib u dhigo bixitaankiisa ilaa xagaaga